Video: Soomaali ka cararay Mareeykanka oo 21 saacadood u lugeeynayay Canada
Home Somali News Video: Soomaali ka cararay Mareeykanka oo 21 saacadood u lugeeynayay Canada
Mohamed waa Muwaadin Soomaaliyeed oo qaxooti ahaan ku galay dalka Mareeykanka, waxa uu ka cararay Minneapolis waxaana uu lug ku gaaray dalka Canada, safarkaasoo ku qaatay mudo 21 saacadood ah.
Mohamed iyo qaar badan oo Soomaali ah islamarkaasna aan sharci ku haysan dalka Mareeykanka, ayaa bilaabay ineey isaga cararaan oo ay u tahriibaan Canada tan iyo markii la doortay Donald Trump, kaasoo qaab aan wanaagsaneen kula dhaqmay qaxootiga Mareeykanka ku sugan.
Mohamed ayaa sheegay in 21 saacaood uu kusoo lugeeynay dhul howd ah islamarkaasna mugdi iyo Baraf ah.
Markii uu soo gaaray xuduudka gudaha Canada, ayaa waxaa qabtay Booliska dalkaas, waxaana uu aaminay inuu u gacan galay Booliska Canada, balse waxaa loo sheegay inuu ku suganyahay gudaha Canada islamarkaasna uu walwalka iska dhaafo.
Ilaa 400 oo Soomaali ah islamarkaasna aan sharci ku haysan Mareeykanka, ayaa ka gudbay xuduudka Canada tan iyo Markii Donald Trump loo doortay Madaxweynaha Mareeykanka.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa goor dhow shaaciyay in...